9 Naizvozvo, achikwira chikepe, akayambuka, akapinda muguta rokwake.+ 2 Zvino tarira! vakanga vachimuunzira munhu akaoma rutivi rwomuviri akarara pamubhedha.+ Paakaona kutenda kwavo Jesu akati kune akanga akaoma rutivi rwomuviri: “Shinga, mwana; zvivi zvako zvakanganwirwa.”+ 3 Uye, tarira! vamwe vevanyori vakataurirana vachiti: “Munhu uyu ari kumhura.”+ 4 Jesu, achiziva kufunga kwavo,+ akati: “Muri kufungirei zvinhu zvakaipa mumwoyo menyu?+ 5 Somuenzaniso, ndezvipi zviri nyore, kuti, ‘Zvivi zvako zvakanganwirwa,’ kana kuti, ‘Simuka ufambe?’+ 6 Zvisinei, kuti muzive kuti Mwanakomana womunhu ane simba rokukanganwira zvivi panyika+—” akabva ati kune akanga akaoma rutivi rwomuviri: “Simuka, tora mubhedha wako, uende kumba kwako.”+ 7 Iye akasimuka akaenda hake kumba kwake. 8 Boka revanhu parakaona izvi, vakabatwa nokutya, vakakudza Mwari,+ uyo akapa simba+ rakadaro kuvanhu. 9 Zvino, achipfuura kubva ipapo, Jesu akaona mumwe murume ainzi Mateu agere pahofisi yomutero, akati kwaari: “Iva muteveri wangu.”+ Pakarepo akasimuka akamutevera.+ 10 Gare gare, paakanga akatsenhama patafura mumba,+ tarira! vateresi vazhinji nevatadzi vakauya, vakatanga kutsenhama naJesu nevadzidzi vake. 11 Asi vaFarisi vachiona izvi vakatanga kuti kuvadzidzi vake: “Nei mudzidzisi wenyu achidya nevateresi nevatadzi?”+ 12 Achivanzwa, iye akati: “Vanhu vakagwinya havadi chiremba,+ asi vanorwara vanomuda. 13 Saka endai, mudzidze kuti izvi zvinorevei, ‘Ndinoda ngoni, kwete chibayiro.’+ Nokuti handina kuuya kuzoshevedza vanhu vakarurama, asi vatadzi.” 14 Vadzidzi vaJohani vakabva vauya kwaari, vakabvunza kuti: “Nei isu nevaFarisi tiine tsika yokutsanya asi vadzidzi venyu vasingatsanyi?”+ 15 Jesu akati kwavari: “Shamwari dzomuroori dzine chikonzero chokuchema here chero bedzi muroori+ achiri nadzo? Asi mazuva achauya padzichatorerwa muroori,+ uye idzo dzichabva dzatsanya.+ 16 Hapana munhu anosonera chigamba chejira idzva panguo yokunze tsaru; nokuti simba racho rose ringakweva nguo yacho yokunze, uye ingawedzera kubvaruka.+ 17 Uyewo vanhu havaisi waini itsva muhombodo tsaru dzewaini; asi kana vakadaro, hombodo dzewaini dzinobva dzaparuka waini yorasika uye hombodo dzewaini dzoparara.+ Asi vanhu vanoisa waini itsva muhombodo itsva dzewaini, uye zvose zviri zviviri zvinochengeteka.”+ 18 Paakanga achivaudza zvinhu izvi, tarira! mumwe mutongi+ akanga asvika akatanga kumupfugamira,+ achiti: “Mwanasikana wangu anofanira kuva afa zvino;+ asi uyai muise ruoko rwenyu paari uye achavazve mupenyu.”+ 19 Zvino Jesu achisimuka, akatanga kumutevera; vadzidzi vake vakadarowo. 20 Uye, tarira! mukadzi akanga achitambura nokubuda ropa kwemakore gumi nemaviri+ akauya necheshure, akabata masa yenguo yake yokunze;+ 21 nokuti akaramba achiti mumwoyo make: “Kana ndikangobata nguo yake yokunze ndichapora.”+ 22 Jesu akatendeuka uye, achimuona, akati: “Shinga, mwanasikana; kutenda kwako kwakuporesa.”+ Kubvira paawa iyoyo mukadzi wacho akapora.+ 23 Zvino paakapinda mumba momutongi wacho,+ akaona varidzi venyere neboka racho revanhu richiita nyonganyonga noruzha,+ 24 Jesu akatanga kuti: “Budai muno, nokuti kasikana hakana kufa, asi kakarara.”+ Ivo vakatanga kumuseka vachimuzvidza.+ 25 Boka revanhu parakangobudiswa panze, akapinda akabata ruoko rwako,+ kasikana kacho kakamuka.+ 26 Chokwadi, kutaura pamusoro peizvi kwakapararira munzvimbo iyoyo yose. 27 Jesu zvaakanga achipfuura achibva ipapo, mapofu maviri+ akamutevera, achishevedzera, achiti: “Tinzwirei ngoni,+ Mwanakomana waDhavhidhi.” 28 Pashure pokunge iye apinda mumba, mapofu acho akauya kwaari, Jesu akaabvunza, kuti: “Mune kutenda here+ kwokuti ndinogona kuita izvi?” Iwo akamupindura achiti: “Hungu, Ishe.” 29 Iye akabva abata maziso awo,+ achiti: “Ngazviitike kwamuri maererano nokutenda kwenyu.” 30 Maziso awo akaona. Zvakare, Jesu akaarayira zvakasimba, achiti: “Onai kuti hapana munhu anozozviziva.”+ 31 Asi iwo, abuda kunze, akazivisa pamusoro pake munzvimbo iyoyo yose.+ 32 Zvino pavakanga vava kuenda, tarira! vanhu vakauya kwaari nomurume aiva mbeveve akanga aine dhimoni;+ 33 uye pashure pokunge dhimoni racho radzingwa, murume uya aiva mbeveve akataura.+ Naizvozvo, mapoka evanhu akashamiswa,+ akati: “Chinhu chakadai hachina kumboonekwa pakati paIsraeri.” 34 Asi vaFarisi vakatanga kuti: “Anodzinga madhimoni nomutongi wemadhimoni.”+ 35 Zvino Jesu akatanga kushanyira maguta ose nemisha achidzidzisa mumasinagogi avo nokuparidza mashoko akanaka oumambo achirapa hosha dzemarudzi ose noundonda hwemarudzi ose.+ 36 Achiona mapoka evanhu akasiririswa+ navo, nokuti vaibatwa zvisina kunaka uye vakanga vakapararira kufanana nemakwai asina mufudzi.+ 37 Iye akabva ati kuvadzidzi vake: “Chokwadi, kukohwa kukuru, asi vashandi vashoma.+ 38 Naizvozvo, kumbirai Tenzi wokukohwa kuti atumire vashandi mukukohwa kwake.”+